လာမည့် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့မှာ သမ္မတရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည့် ဒေါ်နယ်ထရမ့််ကိုသက်တမ်းမကုန်ဆုံးချိန်ကာလအတွင်း၌ ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နန်စီပလိုစီ ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အပေါင်းအပါတို့က လွှတ်တော်အဆောက်ဦးစီးနင်း အကြမ်းဖက်မှု
၌ ထရမ့်က သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပြီး ဆူပူမှုတွေ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသောစွဲချက်ဖြင့် တရားစွဲဆိုမှုတွေ လုပ်ပြီး ရာထူးကနေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အပြင်းအထန်ကြိုးစားနေကြသည့်အပေါ်ရီပတ်ဘလစ်ကန် အချို့ကလည်းထောက်ခံမှုတွေ ရှိနေကြသလို၊ယခုလို တရားစွဲဆိုမှုလုပ်ခြင်းဟာ အမိနိုင်ငံရဲ့ အကျိုးစီးပွားကိုများ
စွာထိခိုက်နိုင်ပြီး၊စည်းလုံးညီညွတ်မှုကိုပြိုလဲစေနိုင်ပြီး အကွဲအပြဲ ဇာတ်လမ်းတွေနှင့် အပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုတွေကို ရှိစေနိုင်သည့်အတွက် ကန့်ကွက်ကြသည့် ဒီမိုကရက်တစ်အချို့လည်း ရှိနေကြသည်။
နနစြီပလိုစီဟာ ဒေါနြယထြရမြ့ရဲ့ သမျမတသကတြမြးတလွှောကလြုံး ရာထူးကနေ ဖယရြှားနိုငဖြို့အရေးကို တောကလြွှောကြ လုပဆြောငနြခေဲ့သူလညြးဖှဈသညြ။အောငမြှငမြှုတော့ မရှိခဲ့ပေ။ယခုတကှိမမြှာတော့ လှှတတြောြ ၂ရပစြလုံး၌ ဒီမိုကရကတြဈပါတီက အမတနြရောအမွားစု ရထားပှီး၊တရားစှဲ
ဆိုမှု အောငမြှငလြိမြ့မညလြို့ ယုံကှညထြားပုံရပါသညြ။အောကလြှှတတြောြ၌ တရားစှဲဆိုရေးမဲခှဲဆုံးဖှတမြှု အောငမြှငခြဲ့ပှီးနောကြ အထကလြှှတတြောြ၌ မဲခှဲဆုံးဖှတမြှုလုပပြှီး မဲအရအတှေကစြုစုပေါငြးရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံနှငြ့အထကြ ရရှိခဲ့ရငြ ထရမြ့ကြိုရာထူးကနေ ဖယရြှားနိုငပြါလိမြ့မညြ။ဒီမိုကရကတြဈပါတီနှငြ့ အမရေိကနရြဲ့ သတငြးမီဒီယာကှီးတှေ အပါအဝငြ သမျမတဟောငြးအိုဘားမားနှငြ့ အပေါငြးအပါ အုပစြု၊တရုတကြှနမြှူနဈပါတီအစိုးရနှငြ့ အပေါငြးအပါမွားတို့ကဒေါနြယထြရမြ့သမျမတ မဖှဈဖို့အရေးကိုအစှမြးကုနြ အငတြိုကအြားတိုကြ ကှိုးပမြးလုပဆြောငနြကှသေညြ။
ဒေါနြယထြရမြ့ကို နိုငငြံရေးဇာတခြုံပေါြ လုံးဝ ပှနမြရောကနြိုငဖြို့အရေးဟာ ၎င်းငျးငြးတို့အတှကြ ထိပတြနြးဦးစားပေး အရေးတခုလိုသဘောထားနကှပေုံရပါသညြ။တှဈတာ၊ဖေ့ဈဘုတတြို့ ဆိုရငြ လှတလြပစြှာပှောဆိုခှငြ့ဆိုသညြ့အခှငြ့အရေးကို ပိတပြငတြားမှဈရုံတငမြကဘဲ ငါတို့နဲ့ သဘောထားမတူ၊ဘကမြတူသူကို ငါတို့ပလကဖြောငြးသုံးခှငြ့မပှုနိုငဘြူးဆိုသညြ့ အခွိုးမွိုး ခွိုးလာကှသညြ။ဒေါနြယထြရမြ့လိုသမျမတမွိုးရဲ့ အကောငြ့ကြိုတောငမြှ မိမိတို့အကွိုးစီးပှားအတှကြ အလို့ငှာ ဘယသြူတှဘောပှောပှော၊ဘာမှငမြှငြ ပြိတတြယကြှာ ဆိုသညြ့သဘောမွိုးလုပခြဲ့တာကတော့ အတငြ့ရဲလှနြး၊အကညွြးတနလြှနြးလှပါသညြ။Parlor လူမှုပလကဖြောငြးဟာ မညသြူမဆို လှတလြပစြှာ ပှောဆိုခှငြ့ပှုသညြ။
ဘကလြိုကပြှီးတော့မညသြူ့ကိုမှ ဆငဆြာဖှတတြောကခြှငြးမွိုးမလုပဟြူသညြ့ အတိုငြးလှတလြပစြှာပှောဆိုခှငြ့ပှုထားခှငြးဟာ ဒေါနြယထြရမြ့ထောကခြံသူတှကေို ထောကပြံ့ပေးနသညေလြို့ ယူဆပှီး အမရေိကနရြဲ့ နညြးပညာကုမျပဏီကှီးတှကအေခငွြးခငွြးညှိပှီး ဝိုငြးပှီး နှိပကြှပကြှပါသညြ။(အနာဂတြ၌ big tech ကုမျပဏီကှီးတှရေဲ့ အားပှိုငမြှု ကှီးလာနိုငသြညြ။)အစောပိုငြး၌ ဒေါနြယထြရမြ့က နနစြီပလိုစီတို့ရဲ့တရားစှဲဆိုမှုကို ဆိတဆြိတနြခေဲ့ပှီးမှ တနပြှနတြိုကခြိုကမြှုလုပသြညြ့အနဖှငြေ့ ၂၀၁၆ရှေးကောကပြှဲမှာ အိုဘားမား အစိုးရက ထရမြ့မဲဆှယအြဖှဲ့နှငြ့ မဲဆှယမြှုလုပငြနြးတှကေိုတရားမဝငသြူလွှိုထောကလြှမြးမှုလုပခြှငြး၊အနှောငြ့အယှကပြှုခှငြးတို့အပါအဝငြ နိုငငြံတောလြုံခှုံရေးအဆငြ့ သတမြှတပြှီးထိနြးသိမြးထားသညြ့ မလွောမြကနမြှု လုပရြပမြွိုးတှေ ပါဝငသြညြ့ Documentsတှကေို မကှာခငရြကပြိုငြးအတှငြး၌ ဖှငြ့ခတွော့မညလြို့ ဆိုလြိုကပြှီလညြးဖှဈသညြ။
အဲဒိDocumentတွေနှင့် အရှုပ်အထုပ်ဇာတ်လမ်းဖိုင်တွဲတွေကို FBIက ၄နှစ်တာကာလတလျှောက်လုံး လျှို့ဝှက်ထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့လည်း သိရှိရပါသည်။အိုဘားမားလည်းထိုကိစ္စအပေါ် စိုးရိမ်မှုတွေ များစွာရှိနေပုံရသည်။ဒါ့ကြောင့် ဂျိုးဘိုင်ဒန် သမ္မတဖြစ်ရေးအတွက်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းမှုနှင့် ထရမ့်မကောင်းကြောင်း ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကောင်းကြောင်းဟောပြောမှုတွေကို တောက်လျှောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ဂျိုးဘိုင်ဒန် သမ္မတဖြစ်ခဲ့ရင် အိုဘားမားဟာမင်း ဆရာ နေရာကနေ နေပြီး အကြံပေးကြိုးကိုင်မှုတွေ လုပ်လို့ရပြီး မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်လည်း အကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်လို့ယုံကြည်ထားပုံလည်း ရပါသည်။
House Speaker Nancy Pelosi of Calif., center, walks towards the House Chamber on Capitol Hill, Wednesday, Jan. 15, 2020, in Washington. the House is set to vote to send the articles of impeachment against President Donald Trump to the Senate foralandmark trial on whether the charges of abuse of power and obstruction of Congress are grounds for his removal. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
ဒါ့ကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ အားနဲ့ သူ့ရဲ့ အပေါင်းအပါတို့ရဲ့အားကို ယူပြီး ထရမ့်ကို အပြတ်တိုက်ခဲ့ပါသည်။နန်စီပလိုစီကြတော့ ထရမ့်ကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ မုန်းတီးသည့်သဘောတွေ့ရသည်။ထရမ့်ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြုမိန့်ခွန်းစာရွက်ကို ရုပ်သံ သတင်းမီဒီယာများရှေ့၌ စုပ်ဖြဲပစ်သည့်လုပ်ရပ်အပေါ်ဝေဖန်ပြစ်တင်မှုတွေ ခံခဲ့ရပါသည်။ထို့အပြင်ကိုဗစ်ကာလ၌mask မတပ်ခြင်းက တကယ့်အရူးတွေရဲ့လုပ်ရပ်ဘဲ။မတပ်ခြင်းက နိုင်ငံကို မချစ်တာဘဲလို့တောင်ပြောခဲ့ပြီးမှ သူမ ဗြူးတီးဆလွန်း အလှပြင်သွားရာ၌ လုံးဝ မတပ်ခဲ့ဘဲ သွားခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ထွက်ခဲ့မှု၌လည်း အပြောတမျိုးအလုပ်တမျိုးလုပ်သူအဖြစ် ဒီမိုကရက် အချို့ကတောင်ဝေဖန်မှုတွေလုပ်ခဲ့သည်။
ကိုဗဈကူညီထောကပြံ့ရေးအစီအစဥတြှေ၌လညြးထရမြ့ကြို ပညာပေးခငွရြုံဖှငြ့ အမွိုးမွိုးကနြ့လနြ့တိုကခြဲ့ပါသညြ။ထရမြ့ထောကခြံကှ
သူတှရေဲ့အဆိုအရတော့ နနစြီပလိုစီဟာဆယလြီဖှဈခငွတြဲ့ စိတနြဲ့ လှခငွပြခငွစြိတကြလှနကြဲနသညေလြို့ ဆိုနကှသေညြ။ထို့အပှငထြရမြ့အပေါြ မနာလိုစိတမြွားသူ၊အတျတကှီးသူလို့
လညြး ဝဖနေထြားကှသညြ။ နနစြီပလိုစီရဲ့ရနငြှိုးအတျတထားမှုနှငြ့ ဆယလြီဖှဈခငွတြဲ့ သူ့ရဲ့ငါစှဲအတျတကှီးမှုတို့က အမရေိကနကြို အစိတစြိတအြမှှာမှှာ ကှဲသှားနိုငတြဲ့အထိ
ဒုကျခပေးနိုငပြါသညြ။ထရမြ့က ရာထူးကနဆငြေးပေးရပမယြေ့ ထရမြ့ဝါဒက အမရေိကနမြှာ ကာလတခုလောကကြှာတဲ့အထိ အရိုးစှဲ ကနွရြဈမှုတှရှေိနိုငပြါသညြ။ထို့ကှောငြ့ ဂွိုးဘိုငဒြနအြစိုးရဟာနိုငငြံ့စညြးလုံးရေးကို အဓိက ဦးစားပေးနရော၌မထားဘဲ စခနြးသှားခဲ့ရငတြော့ အမရေိကနရြဲ့အနာဂတြ မကောငြးနိုငလြောကပြါ။
လာမည့် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့မှာ သမ္မတရာထူးသက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မည့် ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုသက်တမ်းမကုန်ဆုံးချိန်ကာလအတွင်း၌ ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ရန်အတွက် အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ နန်စီပလိုစီ ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရက်တစ် အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အပေါင်းအပါတို့က လွှတ်တော်အဆောက်ဦးစီးနင်း အကြမ်းဖက်မှု
နန်စီပလိုစီဟာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ သမ္မတသက်တမ်းတလျှောက်လုံး ရာထူးကနေ ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အရေးကို တောက်လျှောက် လုပ်ဆောင်နေခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။အောင်မြင်မှုတော့ မရှိခဲ့ပေ။ယခုတကြိမ်မှာတော့ လွှတ်တော် ၂ရပ်စလုံး၌ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက အမတ်နေရာအများစု ရထားပြီး၊တရားစွဲ
ဆိုမှု အောင်မြင်လိမ့်မည်လို့ ယုံကြည်ထားပုံရပါသည်။အောက်လွှတ်တော်၌ တရားစွဲဆိုရေးမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှု အောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက် အထက်လွှတ်တော်၌ မဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုလုပ်ပြီး မဲအရေအတွက်စုစုပေါင်းရဲ့ ၃ပုံ၂ပုံနှင့်အထက် ရရှိခဲ့ရင် ထရမ့်ကိုရာထူးကနေ ဖယ်ရှားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီနှင့် အမေရိကန်ရဲ့ သတင်းမီဒီယာကြီးတွေ အပါအဝင် သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားနှင့် အပေါင်းအပါ အုပ်စု၊တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရနှင့် အပေါင်းအပါများတို့ကဒေါ်နယ်ထရမ့်သမ္မတ မဖြစ်ဖို့အရေးကိုအစွမ်းကုန် အင်တိုက်အားတိုက် ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်နေကြသည်။
ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကို နိုင်ငံရေးဇာတ်ခုံပေါ် လုံးဝ ပြန်မရောက်နိုင်ဖို့အရေးဟာ ၎င်းတို့အတွက် ထိပ်တန်းဦးစားပေး အရေးတခုလိုသဘောထားနေကြပုံရပါသည်။တွစ်တာ၊ဖေ့စ်ဘုတ်တို့ ဆိုရင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ဆိုသည့်အခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ရုံတင်မကဘဲ ငါတို့နဲ့ သဘောထားမတူ၊ဘက်မတူသူကို ငါတို့ပလက်ဖောင်းသုံးခွင့်မပြုနိုင်ဘူးဆိုသည့် အချိုးမျိုး ချိုးလာကြသည်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်လိုသမ္မတမျိုးရဲ့ အကောင့်ကိုတောင်မှ မိမိတို့အကျိုးစီးပွားအတွက် အလို့ငှာ ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော၊ဘာမြင်မြင် ပိတ်တယ်ကွာ ဆိုသည့်သဘောမျိုးလုပ်ခဲ့တာကတော့ အတင့်ရဲလွန်း၊အကျည်းတန်လွန်းလှပါသည်။Parlor လူမှုပလက်ဖောင်းဟာ မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ပြုသည်။
ဘက်လိုက်ပြီးတော့မည်သူ့ကိုမှ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ခြင်းမျိုးမလုပ်ဟူသည့် အတိုင်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ပြုထားခြင်းဟာ ဒေါ်နယ်ထရမ့်ထောက်ခံသူတွေကို ထောက်ပံ့ပေးနေသည်လို့ ယူဆပြီး အမေရိကန်ရဲ့ နည်းပညာကုမ္ပဏီကြီးတွေကအချင်းချင်းညှိပြီး ဝိုင်းပြီး နှိပ်ကွပ်ကြပါသည်။(အနာဂတ်၌ big tech ကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ အားပြိုင်မှု ကြီးလာနိုင်သည်။)အစောပိုင်း၌ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က နန်စီပလိုစီတို့ရဲ့တရားစွဲဆိုမှုကို ဆိတ်ဆိတ်နေခဲ့ပြီးမှ တန်ပြန်တိုက်ခိုက်မှုလုပ်သည့်အနေဖြင့် ၂၀၁၆ရွေးကောက်ပွဲမှာ အိုဘားမား အစိုးရက ထရမ့်မဲဆွယ်အဖွဲ့နှင့် မဲဆွယ်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတရားမဝင်သူလျှိုထောက်လှမ်းမှုလုပ်ခြင်း၊အနှောင့်အယှက်ပြုခြင်းတို့အပါအဝင် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးအဆင့် သတ်မှတ်ပြီးထိန်းသိမ်းထားသည့် မလျော်မကန်မှု လုပ်ရပ်မျိုးတွေ ပါဝင်သည့် Documentsတွေကို မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်း၌ ဖွင့်ချတော့မည်လို့ ဆိုလိုက်ပြီလည်းဖြစ်သည်။
ကိုဗစ်ကူညီထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်တွေ၌လည်းထရမ့်ကို ပညာပေးချင်ရုံဖြင့် အမျိုးမျိုးကန့်လန့်တိုက်ခဲ့ပါသည်။ထရမ့်ထောက်ခံကြ
သူတွေရဲ့အဆိုအရတော့ နန်စီပလိုစီဟာဆယ်လီဖြစ်ချင်တဲ့ စိတ်နဲ့ လှချင်ပချင်စိတ်ကလွန်ကဲနေသည်လို့ ဆိုနေကြသည်။ထို့အပြင်ထရမ့်အပေါ် မနာလိုစိတ်များသူ၊အတ္တကြီးသူလို့
လည်း ဝေဖန်ထားကြသည်။ နန်စီပလိုစီရဲ့ရန်ငြိုးအတ္တထားမှုနှင့် ဆယ်လီဖြစ်ချင်တဲ့ သူ့ရဲ့ငါစွဲအတ္တကြီးမှုတို့က အမေရိကန်ကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ ကွဲသွားနိုင်တဲ့အထိ
ဒုက္ခပေးနိုင်ပါသည်။ထရမ့်က ရာထူးကနေဆင်းပေးရပေမယ့် ထရမ့်ဝါဒက အမေရိကန်မှာ ကာလတခုလောက်ကြာတဲ့အထိ အရိုးစွဲ ကျန်ရစ်မှုတွေရှိနိုင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် ဂျိုးဘိုင်ဒန်အစိုးရဟာနိုင်ငံ့စည်းလုံးရေးကို အဓိက ဦးစားပေးနေရာ၌မထားဘဲ စခန်းသွားခဲ့ရင်တော့ အမေရိကန်ရဲ့အနာဂတ် မကောင်းနိုင်လောက်ပါ။
Previous Article တခေတ်ကုန်တဲ့ဒေါ်နယ်(ပြတိုက်ထဲရောက်သွားတဲ့ထရမ့်ဘေဘီ)
Next Article ထရန့်စစ်တမ်း(ထရန့်သည် အိမ်ဖြူတော် ရှေ့ မြက်ခင်းပြင်ပေါ်ရှိ မရိမ်းဝမ်း ရဟတ်ယာဉ်ကြီးပေါ်သို့ တက်ပြီး ဖလော်ရီဒါ သို့ ပြန်ရမည့် အချိန်ကား နာရီ လေးဆယ် သာ လိုပေတော့သည်။)